कस्तो लाग्यो गरुड पुराण ? - चलचित्र - साप्ताहिक
सुवास कोइराला निर्देशित चलचित्र गरुड पुराण गतसाता प्रदर्शनमा आयो । शुक्रबार एक्लै प्रदर्शित यो चलचित्रले खासै व्यापार गर्न सकेन । दुई दिन पनि हलमा टिक्न नसकेको गरुड पुराण हेर्ने दर्शकले समेत खासै राम्रो प्रतिक्रिया दिएनन् । यसै साता चलचित्रको विशेष शोसमेत थियो, जहाँ पत्रकार, उद्योगी तथा नेपाली चलचित्रका चर्चित अनुहारहरू उपस्थित थिए । यो चलचित्र कस्तो लाग्यो ? केही पत्रकार तथा दर्शकको भनाइ जस्ताको तस्तै :
दिप्सन लुइँटेल, पत्रकार : चलचित्रको नामका कारण यो चलचित्र विशेष छ भन्ने लागेर म हेर्न गएको थिएँ, तर पूरै निराश भएर फर्किएँ । यो चलचित्रमा दर्शकले पचाउन नसक्ने अश्लील दृश्यहरू समावेश छन् । कमेडी चलचित्र बनाउन खोजिएको भए पनि दर्शक हाँस्दैनन्, चलचित्रका कलाकार हाँसेर मात्र त भएन नि † समग्रमा भन्नुपर्दा चलचित्र हेरिसकेपछि निकै खल्लो लाग्छ । चलचित्रभरि कुनै सकारात्मक पक्ष फेला पार्न सकिँदैन । निर्देशकीय पाटो झुर हुँदा यो चलचित्र भद्रगोल भएको छ ।
रघुनाथ सापकोटा, पत्रकार : जुन अपेक्षाका साथ यो चलचित्र हेर्न पुगेको थिएँ, त्यो पाउन सकिन । यतिसम्म कि चलचित्रको शीर्षक गरुड पुराण किन राखियो भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउन सकिँदैन । वास्तवमा भन्ने हो भने यो चलचित्र हेरिसकेपछि मेरो टाउको दुख्यो । चलचित्र कहाँबाट सुरु हुन्छ र कहाँ अन्त्य हुन्छ भन्ने थाहा हँुदैन, छाडा संवाद तथा द्विअर्थी शब्दले दर्शकलाई निराश मात्र बनाउँछ ।
किशोर अर्याल, व्यवसायी : काम थिएन, छोराछोरीसहित चलचित्र हेर्न आएको बर्बादै भयो नि † के–के न होला भनेको थिएँ, केही रहेनछ । साँच्ची भन्ने हो भने नेपाली चलचित्र नेपाली दर्शकले मन नपराएको कारण यही हो, एउटा कुरा सोचेर हेर्न गयो अर्कै कुरा हेर्न बाध्य भइन्छ । पैसाको सत्यानाश मात्र ।
विशाल निरौंला, विद्यार्थी : मैले सोचेको एउटा थिएँ, अर्कै पो रहेछ । शनिबारको दिन साथीभाइहरूसँग घुम्न जाने सल्लाह थियो, चलचित्र हेरौं भनेर हलभित्र छिरेको त झुर भयो । म सकेसम्म नेपाली चलचित्र हेर्नुपर्छ, बलिउड–हलिउडका चलचित्र माथि बन्देज लगाउनुपर्छ अनि मात्र दर्शकमा नेपाली चलचित्र हेर्ने बानी बस्छ भन्ने सोच भएको मानिस हुँ तर यसरी, जसले पनि जस्ता पनि चलचित्र निर्माण गर्दा समग्र इन्डस्ट्रिजलाई बेफाइदा भएको छ ।
सम्झना खतिवडा, शिक्षिका : बाजा बजाउनेहरूको कथा उठान गर्न खोजिएको यो चलचित्रको विषयवस्तु राम्रो छ चलचित्र कसरी सेन्सर पास भयो भन्ने मैले बुझ्न सकिन । यो चलचित्र हेर्नेहरूले छाडा संवाद मात्रै दिमागमा राखेर घर फर्कनुपर्छ । नाजिर हुसेनको अभिनय ठीक भए पनि उनलाई अलिकति फरक हिसाबले प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो । समग्रमा भन्ने हो भने मलाई यो चलचित्र मन परेन ।